TOAMASINA : Miantso fivondronan’ireo mpanakanto ny fikambanana TAMTAM
Ny volana avrily lasa teo no tafajoro ao Toamasina ny fikambanana TamTam na Tanora Atsinanana Managna Talenta Ara-Mozika. Fikambanana izay ivondronan’ireo mpanakanto tanora. 11 juillet 2017
Mahatsapa mantsy izy ireo fa nihena ny firaisankina teo amin’ny artista avy eto Toamasina tato ho ato, ka mila averina amin’ny laoniny izany. « Tsy tokony ao anatin’ny fahoriana ihany vao ahitana fitambarana eo amin’ny samy mpiangaly ny zavakanto », hoy Imbelomaso Jericcho Ezéchias, filohan’ny TamTam.
Ho an’ny mpikambana hamoaka hira dia efa misy trano famokarana miara-miasa amin’ny TamTam mba tsy hampidangana loatra ny saran’ny famoahana ny vokatra. Misy koa ny fiaraha-miasa amin’ny mpandraharaha manana kojakojan-java-maneno miara-miasa amin’ny fikambanana, ka manana tombony manokana koa ny mpikambana TamTam rehetra amin’ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Tombony ho an’ny mpikambana ihany koa ny fihenan’ny saram-pitsaboana raha sanatria marary. Efa misy mpitsabo miara-miasa amin’ny TamTam amin’izay lafiny ara-pahasalamana izay, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny fikambanana, Totomora Josaphat.
Tsy manana olana amin’ireo mpanakanto zoky ireo mpitarika ny TamTam, araka ny fanambaràn’izy ireo. Ireto farany izay nilaza ny hikarakara hetsika fahatsiarovana an’ireo mpanakanto nitondra avo ny lazan’i Toamasina saingy efa nodimandry, toa an’i Jean Fredy. Misokatra ho an’ny tanora mpanakanto rehetra manerana ny Nosy ny TamTam.